Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga & Waxa Ay Wargeysyadu Ka Qoreen Maanta Oo Jimce Ah - GOOL24.NET
May 27, 2022 Apdihakem Omer Adam
Manchester United ayaa u sheegtay xiddiga Barcelona ee Frankie De Jong inay meel kale u weecan doonaan haddii uusan go’aan ka gaadhi karin mustaqbalkiisa. (Sport – in Spanish)
Monaco khadkeeda dhexe ee Aurelien Tchouameni heshiiskii uu Real Madrid ugu biirayay ayaa sababo cashuur la xidhiidha u hakaday, Madrid ayaa 80 Milyan oo euro ka bixinaysa saxeexiisa. (ESPN)
Manchester United, Liverpool, Arsenal iyo Chelsea ayaa dhammaantood xiisaynaya Aurelien Tchouameni isla markaana u dhaqaaqi doona haddii heshiiskiisa Real Madrid suurogali waayo. (Sun)
AC Milan ayaa doonaysa inay heshiis cusub ka saxeexato Rafael Leao si ay meesha uga saarto xiisaha Real Madrid uga imanaya, Real ayaa Leao doonaysa kaddib markii Mbappe heshiis cusub u saxeexay Paris St-Germain. (La Gazzetta dello Sport – in Italian)
Real Madrid ayaa doonaysa saxeexa khad dhexe iyo weeraryahan xagaaga waxaana ay ka wada hadli doonaan marka ay Spain ku laabtaan kaddib Champions League. (Marca)
Everton weeraryahankeeda Richarlison ayaa ka tagi kara kooxdaas xagaagan xilli ay xiisaynayaan Tottenham, Real Madrid iyo PSG. (Mail)
Everton ayaa West Ham kula tartamaysa saxeexa garabka Burnley ee Cornet kaddib markii ay Clarets ka dhaadhaceen Premier League. (Telegraph, subscription required)
Tottenham weeraryahankeeda Harry Kane ayaa diyaar u ah inuu wadahadalo heshiis kordhin ah la furo kooxdaas walow uu riixayay in Man City laga iibiyo xagaagii hore. (Evening Standard)
Inter Milan ayaa rajaynaysa inay la saxeexato Henrikh Mkhitaryan marka uu heshiiskiisa Roma dhaco xagaaga, sidoo kale 33 sano jirkaas ayaa ka fikiraya heshiis kordhin uu ka helay kooxda Europa Confrence League kusoo guuleysatay. (Fabrizio Romano)
Arsenal ayaa xiisaynaysa khadka dhexe ee kooxda Lens ee Cheick Doucoure balse sidoo kale waxa isha ku haya dhinacooda kooxaha kala ah Brighton, Everton, Crystal Palace iyo Wolves. (Mirror)
Arsenal ayaa ka fikiraysa inay u dhaqaaqdo saxeexa daafaca bidix ee Man City ee Oleksandr Zinchenko. (Mail)
Leicester City ayaa heshiis cusub oo hal sano ah ka saxeexanaysa daafaca dhexe ee Evans oo 34 sano jir ah halka ay dhagaysan doonaan dalabaadka u imanaya Jannik Vestergaard iyo Boubakary Soumare xilli tababare Brendan Rodgers doonayo inuu dib u habayn weyn ku sameeyo kooxdiisa. (Mail)
Manchester United ayaa toddobaadka dambe dalab ka gudbin karta Christopher Nkuku oo Liverpool iyo Chelsea bartilmaameed u ah isla markaana diidan inuu heshiis kordhin u sameeyo RB Lepizig. (Florian Pettenberg, Sky Sport Germany)
Paris St-Germain ayaan la saxeexan doonin Ousmane Dembele xagaagan marka laga yimaado in si weyn loola xidhiidhinayo. (Le Parisien – in French, subscription required)
Manchester Unitedayaa wadahadalo kala yeelatay tababaraheeda Erik Ten Hag arrimaha daafacyada dhexe ee Jurrien Timber oo ka tirsan Ajax iyo midka Villarreal ee Pau Torres. (Caught Offside)
Paul Pogba timo jarihiisa ayaa barta Instagram ku qishay in 29 sano jirkaasi uu ku laabanayo Juventus. (Manchester Evening News)
West Ham ayaa xagaaga dhagaysan doonta dalabaadka u imanaya Tomas Soucek kaddib markii ay isku dhaceen tababare David Moyes. (Football Insider)
Crystal Palace ayaa isha ku haysa inay u dhaqaaqdo goolhayaha West Bromwich bilaashka kaga tagaya ee Sam Johnstone. (Mail)
Manchester United ayaa wakiiladiisa wax ka weydiisay bil kahor weeraryahan Dane Scarlett balse waxa loo sheegay in 18 sano jirkaasi heshiis kordhin u sameeyay. (Manchester Evening News)
Fiorentina ayaa ku dhibtoonaysa inay rasmi ka dhigto heshiiska Lucas Torreira iyaga oo raba inay 12.5 Milyan pound-ka ay Arsenal doonayso hoos u dhigto. (Evening Standard)